Kuboshwe abasolwa ngelokukhwabanisa | News24
Kuboshwe abasolwa ngelokukhwabanisa
x Isithombe: Sithunyelwe
ABASESHI baKwaDukuza babophe abasolwa abathathu ngoLwesihlanu oledlule, ngomhla ka-14 kuMfumfu (October) edolobheni laKwaDukuza abasolwa ngokukhwabanisa amakhadi asebhange.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Lieutenant Colonel Thulani Zwane uthe abaseshi bebesebenzela enkabeni yedolobha kulandela ukukhuphuka kwezinga lokukhwabaniswa kwamakhadi asebhange
Uthe: “Ngesikhathi amaphoyisa esebenzela edolobheni, abone imoto esolisayo kanye nabasolwa besilisa ababili beme eduzane ne-ATM. Ngenkathi amaphoyisa esondela emotweni, abasolwa ababili batheleke phakathi kwemoto babaleka,” kusho yena.
Uthe amaphoyisa ahlale abasolwa ezithendeni aze ababamba ku-King Shaka Street.
Abasolwa baneminyaka esukela ku-30 kuya ku-40.
UMnuz Zwane uthe abasolwa batholakale namakhadi asemabhange ahlukahlukene.
Uthe: “Kusolaka ukuthi abasolwa bayathinteka kumanye amacala okukhwabanisa avulwe kwezinye izindawo. Kuvulwe icala lokukhwabanisa emaphoyiseni aKwaDukuza kanti kulindeleke ukuthi abasolwa bazovela enkantolo ngoMsombuluko, ngomhla ka-17 kuMfumfu,” kusho yena.
Abasolwa bazofaka isicelo sebheyile ngoLwesihlanu, ngomhla ka-21 kuMfumfu.
Okhulumela amaphoyisa KwaDukuza unxuse labo abake baba yizisulu zokukhwabaniswa kwekhadi lase bhange ukuba bexhumane namaphoyisa.